Xildhibaan Siciid Shirre oo xukuumadda ugu baaqay inay ka laabato xayiraada gaadiidka. – Radio Daljir
Xildhibaan Siciid Shirre oo xukuumadda ugu baaqay inay ka laabato xayiraada gaadiidka.
Seteembar 1, 2016 10:45 g 0
Garoowe, Sep 02 2016–Xildhibaan Siciid Shire Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Puntland ayaa dhaliilay qorshaha xukuumadda ee ku aadan sugitaanka ammaanka ee la xiriira go’aannadii lagu mamnucay gawaarida xoolaha sida ee isaga kala goosha Puntland iyo Gobollada Koonfureed ee dalka.
Xildhibaanku waxaa uu walwal ka muujiyay in go’aankaasi uu sababi karo in ganacsatadu ay ka wareegaan Puntland, waxaana uu ku baaqay in xukuumaddu ay la timaado qorshe aanan caqabad ku noqon karin ganacsiga xorta ah ee Puntland, laguna sugo nabadgalyada Puntland.
Xildhibaan Siciid Waxaa uu u waramay wariye Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin oo ugu horrayntii waydiiyay booqashadiisa xarunta Daljir Garrowe iyo waxa ay daaran-tahay ?
DHEGEYSO-Maamulka Gobolka Sool ee Puntland oo kahadlay dil kadhacay laascaanood.